Happy New Year 2017 Quotes dhiirigalinta Happy New Year 2017 Quotes dhiirigalinta
Happy New Year 2017 Quotes dhiirigalinta
Iska bilaabay qaar ka mid ah xigasho oo dhiirigalinta sanadka cusub. Waxaan leenahay badan oo iyaga ka mid aad loogu talagalay. Halkan waxa aad ka tagaan!
Halkan waxaa doonaya Year aad u faraxsan iyo barwaaqo New in qof qorax u keena qoyska had iyo jeer.
Sanad cusub 2017 Quotes Best dhiirigalinta
maalmood noqon karaa sida glittery sidii dheemman, saaxiibadaa waxaa laga yaabaa in sida ugu fiican ee dahabka, Waxaa laga yaabaa in aad qalbiga ka sii joogo sida cagaaran sida sumurud, iyo naftaada hadhaan sida saafi ah sida xabbad luul.
Waxaan aad rabto Happy New Year ka hoose ee qalbigayga. Ilaah ha kaa siiyo ah farxad iyo xoog in ay ka gudbaan aad fashilaad sano ee la soo dhaafay.
waxaad quduus uga karaa sanadka cusub ee aadanaha iyo hagaajinta dunida ugu weyn.
Toban, sagaal, sideed, toddobada, lix, shan, afar, saddex, laba, mid ka mid ah, hurray! Year New Its horay! Ku raaxayso xamuulka oo ay leeyihiin waqti fiican ka hor.
Waxaan soo jacayl, caafimaadka, nabadda iyo farxadda. Waxay doonayay guri joogto ah. Waxaan ku bixiyeen cinwaankaaga. Rajaynaynaa in ay gaaraan aad marinkeeda on Year New this.
Waxaan furi doonaa buugga. pages Its yihiin oo bannaan. Waa in aanu si ay u nafteena u geliyeen erayada. Buuggan waxaa loo yaqaan Opportunity iyo cutubka ugu horreeya waa Maalinta Sannadka Cusub. - Edith Lovejoy Pierce
Your guul iyo farxad been aad ku. Resolve in ay sii faraxsan, iyo farxad iyo aad u sameeyaan waa ciidan aan la jabin karin ka dhanka ah dhibaatooyin. - Helen Keller
Waxaa jira waxyaabo ka weyn in la gaaro sanadka kasta New, iyo qof kasta oo kasta iyo waa in ay isu diyaariyaan in ay noqon weyn, ma by erayadii afka, laakiin by badan oo allabaryada. - Michael Johnson Bassey
"Year New kaa siiyo xoogga inuu wajaho caqabadaha nolosha iyo geesinimo si ay ula qabsadaan shiraaqiina si ay u qaataan xaalad kasta oo aad boosaskooda."
"Year New The cusub uu idin siinayo 365 maalmood oo ay la ciyaari -. buuxin la wax alla wixii qalbigaaga dooni si aad qabto wax shalaay ah ee Dhammaadka wareegga sanadlaha ah "
Best Year New 2017 Quotes
"Waayo, erayada sanadkii la soo dhaafay ee ka tirsan luqadda ee sannadkii hore. Oo erayadii ee sanadka soo aadan sugi cod kale "-. T.S. Eliot, Afar Quartets
sanad cusub u taagan inuu inaga sii hor, sida Suurad buug, sugayeen in la qoraal ah. Waxaan kaa caawin karnaa qoro sheeko ag dhigayaa gool. - Melody Beattie
Sanad cusub 2017 xigasho waa kuwa ugu fiican iyo in aad ku kacaya tallaalka!